BARCELONA VS AS ROMA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
(Barcelona) 04 Abriil 2018 – Waxaa caawa guriga Camp Nou ee kooxda Barca marti ku ah kooxda AS Roma oo lugta hore ee rubuc-dhamaadka CL halkaa kula ciyaaraysa.
Dhanka Barca: Hal shaki ayaa kooxda Valverde haysta. Wuxuu ka fikirayaa inuu lugta hore Roma ku wajoho shaxda 4-4-2, balse waa inuu hubiyaa in Busquets diyaar noqon karo bilowga ciyaarta. Dembelé ayay dhici kartaa inuu isna boos helo.
Dhanka Roma: Di Francesco oo Barcelona isagoo uu ka maqan yahay Ünder, kaasoo aan loo yeerin. Waxaa se la heli karaa Nainggolan, balse weli fursadda uu ku safan karaa waa 50%. Waxaa soo kabtay Pellegrini. El Shaarawy ayaa isna shaxda 1-aad ku jira, waxaa se booska ku haysta Defrel.
13 CILLESSEN, 25 VERMAELEN, 22 VIDAL, 6 DENIS SUAREZ, 17 ALCACER, 11 DEMBELE’, 21 ANDRE’ GOMES
28 SKORUPSKI, 5 JUAN JESUS, 25 BRUNO PERES, 7 PELLEGRINI, 30 GERSON, 23 DEFREL, 14 SCHICK
"Mahadsanidiin, Weligeey sidaan oo kale la iima sameyn.".- Ronaldo oo la hadlay Taageerayaasha Juventus